Akụkọ - Ihe okooko osisi na ahịhịa dị iche iche na-enyere gị aka ịme ahụike
Ihe Osisi na Osisi Na-enyere Gị Aka Inye Ahụ Ike
Iji mee ka ikuku gas na-emerụ ahụ nke ọma, cholrophytum bụ okooko osisi mbụ nwere ike itolite n'ụlọ ọhụrụ. A maara Chlorophytum dị ka "onye na-eme ka ihe dị ọcha" n'ime ụlọ ahụ, na-enwe ike iji ike formaldehyde.
Aloe bu ahihia ahihia nke na-eme ka gburugburu obibi di nma ma dikwa ocha. Ọ bụghị naanị na ọ na-ewepụta oxygen n’ehihie, kamakwa ọ na-amịkọrọ ikuku carbon dioxide n’ime ụlọ n’abalị. N'okpuru ọnọdụ ọkụ 24-hour, ọ nwere ike iwepu formaldehyde dị na ikuku.
Agave, sansevierIa na ifuru ndi ozo, puru itinye ihe kariri 80% nke ikuku ndi di n'ime, ma nwee ikike nke oma maka formaldehyde.
Cactus, dị ka echinocactus grusonii na okooko osisi ndị ọzọ, nwere ike ịmị gas na-egbu egbu na nke na-emerụ ahụ site na ịchọ mma dịka formaldehyde na ether, ma nwee ike ịmịkwa ụzarị kọmputa.
Cycas bụ aka ochie n’ime ka mmetọ benzene na-adị n’ime ụlọ, ọ pụkwara imebi formaldehyde nke ọma na kapeeti, ihe ndị na-egbochi ihe, plywood, na xylene zoro ezo na akwụkwọ ahụ aja na-emerụ akụrụ.
Spathiphyllum nwere ike iyo si n'ime ụlọ n'efu gas, ma nwere ụfọdụ ihicha utịp ke helium, benzene na formaldehyde. Maka ozone dị ọcha dị elu, etinyere n'akụkụ gas na kichin, nwere ike ime ka ikuku dị ọcha, wepu ekpomeekpo nri, oriọna na-enweghị isi.
Tụkwasị na nke a, rose nwere ike ịmịpụta gas ndị ọzọ na-emerụ ahụ dị ka hydrogen sulfide, hydrogen fluoride, phenol, na ether. Daisy na Dieffenbachia nwere ike iwepụ mmetọ nke trifluoroethylene n'ụzọ dị irè. Chrysanthemum nwere ikike ịmịnye benzene na xylene, na-ebelata mmetọ benzene.
Flowerkọ ifuru nke ime ụlọ kwesịrị ịhọrọ ụdị dị iche iche dị. N'ozuzu, ọ kwesịrị ịgbaso ụkpụrụ nke enweghị ịhapụ ihe ndị na-emerụ ahụ, mmezi dị mfe, okpukpo udo, na oke kwesịrị ekwesị. Ma, mara ọkwa pls ọ bụ ezie na okooko osisi nwere mmetụta ka mma nke ime ka ikuku dị ọcha, ụzọ kachasị mma isi mee ka ikuku dị ọcha bụ ime ka ikuku dị ike ma mee ka ikuku dị n'ime ụlọ dị ọhụrụ.